Somaliland National Tv - somalilandntv.com
Man City Oo Kulankii Stoke City Ceeb Wayn U Soo Jiiday Guardiola Iyada Oo Noqotay Kooxdii Ugu Horaysay Ee Uu Rekoodhkii Ugu Xumaa
Friday March 10, 2017 - 08:50:27
SLNTV:Man City Oo Kulankii Stoke City Ceeb Wayn U Soo Jiiday Guardiola Iyada Oo Noqotay Kooxdii Ugu Horaysay Ee Uu Rekoodhkii Ugu Xumaa Looga Diwaan Galiyay Kulankii Etihad Stadium.
Manchester City ayaa xalay iska lumisay fursaday ay kaalinta labaad ee horyaalka Premier leaque-ga ku soo gali lahayd isla markaana ay sideed dhibcood u soo jirsan lahayd kooxda hogaanka Premier leaque-ga haysa ee Chelsea, waxayna kulankii Stoke City ee Etihad Stadium isla lumisay laba dhibcood si ay Chelsea uga hoosayso 10 dhibcood taas oo kooxda Antonio Conte u hayad fursad dahabi ah.
Manchester City oo marti loogu aha Etihad Stadium ayaa awoodi wayday in ay wax gool ah ka dhaliyo kooxda Stoke City oo hal dhibic oo muhiim ah kala laabtay Sky Blues. Man City ayaa yeelatay 56 dhibcood waxayna isu dhibco yihiin kooxda Tottenham laakiin fariga goolasha ee labada kooxood u dhexeeya ayaa sabab u noqday In City ay kaalinta saddexaad ku rafato.
Laakiin Manchester City ayaa Guardiola sabab ugu noqotay in uu rekoodhkiisii abid ugu xumaa xalay kula kulmo Etihad Stadium kadib markii ay kooxdiisa City hal bartilmaameed oo kaliya ay goolka Stoke City ku tuurtay. Tan iyo markii uu shaqada tababaranimo ka bilaabay Barcelona ee uu soo maray Bayern Munich iyo waliba intii uu Man City joogay wali hore umay soo dhicin kooxdiisu ay 90 daqiiqo iyo waqtigii dheriga ahaa ay HAL bartilmamaeed ku samayso balse xalay ayay dhacday!!!.